RIP घरविदामा हिडेका नेपाली सेना घर नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाए ! मनमा अलिकति दया भए (RIP)लेख्नुहोला ! – News543Online
RIP घरविदामा हिडेका नेपाली सेना घर नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाए ! मनमा अलिकति दया भए (RIP)लेख्नुहोला !
March 26, 2021 adminLeaveaComment on RIP घरविदामा हिडेका नेपाली सेना घर नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाए ! मनमा अलिकति दया भए (RIP)लेख्नुहोला !
नारायण नगरपालिका वडा नं.११ विन्द्य्यावासिनी काँडा (भक्केमुला) निवासि हाल नेपाली सेनामा धनगढीमा कार्यरत तिर्थ बहादुर बिष्टका जेष्ठ छोरा नवीन बिष्ट (यामु) धनगढीबाट घरविदामा दैलेख आउदै गर्दा मोटरसाइकललाई गाडि’ले ठ’क्कर दिदा उन’को ज्या’न गएको छ‌।कैलाली । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कैलालीको पहलमानपुर सडकखण्डमा गए राति ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ
लुम्बिनी प्रदेश5राजधानीको जगा रोक्का फुकुवा जग्गा पास गर्न पाईने ।
यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई यो सिप अरुमापनि सेयर गर्नुहोला !
सक्किगोनीका कक्रोजको मानसिक अवस्था बिग्रिएको भन्दै सुधार केन्द्र लगियो
नेपालमा बन्यो नया रेकर्ड ! ३७ करोड ८० लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी कस्तो छ हजुर आफ्नो बिचार कमेन्ट गर्नुहोस।